October 28, 2021 adminLeaveaComment on नेपालमै छ यस्तो अचम्मको परम्परा, जहाँ विवाहपछि सबै दाजुभाईसँग पालैपालो रात बिताउनु पर्ने(पुरा हेर्नुहोस)
डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका १ का वडाध्यक्ष क्याल्पो थापा भोटेले चेतनाको कमीले यो प्रथा अझै चलिरहेको बताए । घरको धनसम्पतीमा अंशवण्डा लाग्छ र गरिब भइन्छ भन्ने मानसिकता अझै छ उनले भने यसले गर्दा बहुपति प्रथा हटन नसकेको हो । तपाईंले मुख र निधारमा चु’म्बन गर्नु भयो भने उनीहरु चाँडै लागि तयार हुन्छन् वा महिलामा चाँडै चाहाना पनि बढ्छ ।
श्रीमती माइतीमा बसेको झोकमा एक श्रीमानले जे गरे,त्यसले सबैको होस उडायो!
बज्यो खतराको घन्टी:खोप लगाएका ४२२ जनामा देखियो ओमिक्रोन
नेपालमा अब इन्टरनेट बन्द हुने?
सीसीएमसीको बैठक बस्दै,पुन:लकडाउन?